Cloudwords: Ahịa towa Niile iji mepụta Nchọpụta na Drivegba Ọsọ | Martech Zone
Cloudwords: Global Marketing iji mepụta Nchọpụta na Demgba Ọsọ
Friday, May 20, 2016 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
Ka ụlọ ọrụ na- mee ka ndi mmadu choo ma too n'uwa niile, ọ dị ha mkpa ịsụ asụsụ iri na abụọ iji kpọtụrụ 12% nke ndị na-ege ha ntị. Ebe ọ bụ na ihe karịrị 80% nke ego maka ụlọ ọrụ US na-abịa site na ndị ahịa ụwa, $ 50 + ijeri ọdịnaya #localization na ụlọ ọrụ ntụgharị #translation bụ ihe dị mkpa iji na-akwọ ndị ahịa na ahịa ụwa. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịsụgharị ngwa ngwa ngwa ahịa ha ma gbasaa mba niile na-enwe nnukwu nsogbu: usoro nhazi mpaghara ha dị ugbu a bụ akwụkwọ ntuziaka, na-ewe oge, adịghị ike, ma sie ike ịba ụba.
Oghere Ọdịnaya Globalwa
Ndị na-ere ahịa na-emepụta nnukwu ọnụọgụ nke ire ere na ire ahịa na akpaka ahịa, ịre ahịa ọdịnaya na sistemụ Web CMS ha na-eji napụta ahụmịhe nke onwe na mkpọsa iji lebara ndị mmadụ anya. Iji ruo ndị na-asụ asụsụ dị iche iche n’ụwa niile, ọdịnaya niile ahụ kwesịrị ịkọwa maka ahịa mpaghara. Agbanyeghị, ndị na-enye ọrụ ntụgharị asụsụ anaghị eji sistemụ ndị ahụ, nke na-ebute usoro mmezi na-ezighi ezi. Iji mezuo oge na-aga ahịa, ndị na-ere ahịa ga-eme mgbanwe ntụgharị: N'ihi oge na mmefu ego, ha nwere ike ịtụgharị ụfọdụ akụ maka ụfọdụ ahịa, na-ahapụ ohere maka ego ha ga enweta na tebụl.
Cloudwords na-edozi ihe ọdịiche ọdịnaya ụwa.
Chọpụta AKW CLKWỌ
Cloudwords bụ ahịa ụwa. Dị ka Global Go-to-Market Hub, Cloudwords na-akpachapụ anya arụmọrụ mpaghara maka ọdịnaya niile gafere ụlọ ọrụ ahụ iji nyere ụlọ ọrụ aka ịmalite mkpọsa ọtụtụ asụsụ zuru ụwa ọnụ 3-4 ugboro ngwa ngwa ma ọ dịkarịa ala 30% nke ụgwọ. Richard Harpham, onye isi oche nke Cloudwords
Ezigbo ụlọ ọrụ teknụzụ nke e wuru site na ala, Cloudwords bụ igwe ojii mbụ, ntụgharị akpaaka ntụgharị okwu emere iji gboo mkpa ndị ahịa. Cloudwords na-ewebata njikọta na-enweghị ntụpọ maka ihe karịrị ụlọ ọrụ na-eduga ahịa akpaaka 20, njikwa ọdịnaya, yana sistemụ Web CMS. Ndị a gụnyere Marketo, Adobe, Oracle, HubSpot, WordPress na Drupal, na-eme ka ahịa zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu, na-eme ka ROI dị elu nke mgbalị zuru ụwa ọnụ, na-eme ka ọgbọ na ego na-arịwanye elu.
Cloudwords Key Akụkụ
Real-oge Analytics na Akụkọ: Sochie mmefu, nyochaa usoro arụmọrụ, ma tụọ ogo na ROI na ọkwa ụwa na mpaghara n'otu oge.
Njikwa Mgbasa Ozi Globalwa: Na-emekọ atụmatụ ọnụ ma gbasaa mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ, mpaghara, na mpaghara karịa nke ọma na ngwa ngwa gafee ngalaba, ngalaba azụmaahịa, na ala. Mepụta ọrụ ntụgharị asụsụ wee jiri akara ngosi dị ike soro usoro. Chịkọta ndị na-agbasasị site na ịmekọrịta nkwukọrịta na mmekorita, ma nata ọkwa na ọkwa akpaaka.
Igwe okwu igwe ojii OneReview: Thelọ ọrụ na-eduzi nkwado na -enyocha nyocha na ndezi ihe, ikike ọgbara ọhụụ nke OneReview mere ka ọ bụrụ ụzọ kachasị mfe iji nyochaa ma dezie ọdịnaya atụgharịrị.
Cloudwords Otu TM: A centrally-kwadoro Translation Memory nchekwa data echekwa a ụlọ ọrụ na-ama-sụgharịrị okwu na nkebi ahịrịokwu na-eme ka ha na-emelite n'ime nchekwa data. Ndị ntụgharị gị nwere ohere ịnweta ụlọ ọrụ OneTM nke ụlọ ọrụ gị, na-echekwa oge na ego na ọnụahịa ntụgharị okwu, yana idobe izipu ozi ngwa ahịa na-aga n'ihu n'ọtụtụ ahịa na ọtụtụ asụsụ.
Cloudwords Akụkọ Successga nke Ọma Ndị Ahịa
Cloudwords bụ ihe jikọrọ ya na usoro nhazi maka Fortune 500 na ụlọ ọrụ Global 2000 n'ụwa niile, gụnyere CA Technologies, Palo Alto Networks, Hach, McDonald's, Siemens, Marketo, Iron Mountain, Fitbit, Patagonia, na Blackboard.
Cloudwords na-edozi mkpa dị mkpa maka ndị ahịa ọ bụla na-ere ahịa na ọkwa ụwa. Richard Harpham, onye isi oche nke Cloudwords
Cloudwords weputara Marketo na Njikwa weebụsaịtị ya
Ikpokoro akpaaka na ire ere Marketo bụ ezigbo ihe atụ nke ndị ahịa Cloudwords na-ewepụta weebụsaịtị ndị a na-ahụ anya maka ndị na-ege ntị n'ụwa niile na mpaghara ndị ebumnuche. Ndị otu Marketo nwere ike ịgba ọsọ oge ntụgharị maka ọdịnaya mpaghara ka emeziri saịtị ya zuru ụwa ọnụ n'otu oge ma ọ bụ n'ime ụbọchị nke saịtị US, na izu ma ọ bụ ọnwa ole na ole. Gụọ ọmụmụ ihe zuru ezu.
Neti Palo Alto Na-eru Ọsọ Ndị Na-ege Ntị Globalwa Ọsọ ọsọ na Cloudwords
Netwọk na ụlọ ọrụ nchebe Palo Alto Networks anaghị atụgharị asụsụ nke ọdịnaya dị mkpa iji kwado mkpa mpaghara ha n'ihi na ha nwere usoro mpaghara nke na-arụsi ọrụ ike, na-efu oke ego ma na-eri oge. Cloudwords na-enye ndị otu ahụ ohere ijikwa ọrụ mpaghara, na ntanetị akpaaka n'etiti Adobe Experience Manager na Cloudwords na-agba ọsọ ntụgharị oge, na-enyere ha aka ịmepụta ma nyefee mkpọsa ndị a na-ahụkarị, ugboro ugboro, iji mee ka ọchịchọ na ego zuru ụwa ọnụ. Guo ihe omumu nke oma.
Chọpụta okwu igwe ojii
Isi ụlọ ọrụ dị na San Francisco, Cloudwords na-akwado Storm Ventures na igwe ojii na-ahụ maka ọhụụ dịka Marc Benioff, onye guzobere salesforce.com. Email Discover@cloudwords.com ma ọ bụ gaa na www.cloudwords.com maka ozi ndị ọzọ, ma sonyere mkparịta ụka ụwa na Twitter @CloudwordsInc na na Facebook.
Tags: adobeBọọdụCA TeknụzụCloudwordsDrupalokwukpachaara anyaNhazi nyiwe FaịlụFitbitzuru ụwa ọnụọdịiche ọdịnaya ụwaAzụmaahịa zuru ụwa ọnụmgbasa ozi ahịa ụwaỌchaokpokoroÍgwè ÍgwèakụkụahịaMcDonaldOraclePalo Alto NetworksPatagoniaSiemenssaịtịtranslationWordPress
Ihe mere Snapchat ji agbanwe Mgbasa ozi Digital